News | स्याउ
News | Tag: स्याउ
करोडौंको स्याउ बारीमै थन्कियो
बाजुरा । सडकको सहज पहुँच नहुँदा करोडको स्याउ बारीमै थन्किएपछि किसान चिन्तित बनेका छन् ।
बाजुराको स्याउ बस्तुलाई कुँडो– एक रुपैयाँमा ३ दाना !
बाजुरा । स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका–३ जुकोटमा महेन्द्रबहादुर शाहीको बारीमा १२ सय बोट स्याउ छन् । उनले स्याउखेती गर्न थालेको १५ वर्ष भयो । बारीमा लटरम्म स्याउ फल्छ ।
सिञ्जा । कनकासुन्दरी गाउँपालिकाकी लिपु खत्रीलाई आफ्नो बगैँचामा फलेका स्याउ टिप्न भ्याइनभ्याइ भएको छ । चन्दननाथ–१० की माया देवकोटा पनि एक सातादेखि बारीमा स्याउ टिप्न व्यस्त देखिएका छन् ।
आहा जुम्ली स्याउ (तस्वीर)
जुम्ला तिला गाउँपालिका १ का कृषक महेन्द्र बुढाको बगैचामा जुम्ली स्याउ पाक्न थाले ।
कालीकोटको स्याउ बजारमा
सुर्खेत । कर्णाली सुर्खेत बीरेन्द्रनगरमा जुम्ली स्याउको नाम दिएर बिक्रीमा राखिएको कालीकोट तिला गुफा नगरपालिकाको स्याउ । कृषि ज्ञान केन्द्रले भदौको दोस्रो सातापछि मात्र जुम्ली स्याउ परिपक्व हुने बताएका छन् ।
चार महिनामै स्याउ फलेपछि किसान हर्षित
बाजुरा । जिल्लाको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको चाखुडेथला आधारभूत विद्यालयमा परीक्षणस्वरुप लगाइएका स्याउ यसै वर्ष फलेको छ ।
स्याउ बिक्री गर्नको लागि बजार अभाव हुँदा घरमै कुहियो
दार्चुला । व्यास गाउँपालिका–१ छाँगरु गागाका स्थानीय जीतसिंह बोहराले लगाएको स्याउले बजार नपाउँदा घरमै कुहिएको छ । विसं २०६० देखि स्याउखेती शुरु गरेका बोहराको स्याउ बिक्री गर्नको लागि बजार अभाव हुँदा घरमै कुहिएको हो । छाँगरुमा उत्पादित स्याउ बजार नपाएर बारीमै कुहिने गरेको छ । नजिक बजार नभएको र गाउँबाट बजारसम्म पुर्याउने बाटो नहुँदा यहाँ उत्पादित स्याउ घरबारीमै कुहिने गरेको छ । नेपालतिर बाटोघाटो छैन । भारतीय बजार पुर्याउने पनि बढी ढुवानीमै खर्च हुन्छ । भारतीय सेना, एसएसबीले मात्रै स्याउ खरीद गर्ने गरेका छन् । यो वर्ष झण्डै ३० क्विन्टल बढी स्याउ फलेको बोहराले २० क्विन्टल स्याउ भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई बिक्री गर्नुभएको छ । बाँकी १० क्विन्टल स्याउ घरबारीमै कुहिएको अवस्थामा छ ।
स्वास्थ्यको लागि विहान ‘स्याउ’ खानु फाइदा, के–के छन् फाइदा ?
काठमाडौं । स्वास्थ्यको लागि स्याउ पनि एक लाभदायिक फलफूल हो । जसको नियमित सेवनले हाम्रो शरीरलाई विभिन्न पोषक तत्वहरु उपलब्ध हुन्छ । नियमित स्याउको सेवनले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ बनाई राख्नुको साथै पाचन प्रणालीलाई दुरुस्त राख्छ ।
यस्ता छन् हरेक दिन स्याउ खानुका फाइदाहरु
एजेन्सी । हरेक दिन एउटा स्याउ खाइयो भने डाक्टरकोमा जानु जरुरत पर्दैन अर्थात् हस्पिटल नै जानु पर्दैन भन्ने भनाइ नै छ । स्याउ एउटा फल मात्र नभएर कयौं रोगहरुलाई दुर राख्ने एक अचुक औषधि पनि हो ।